January 8, 2021 - ApannPyay Media
ကျီးအာသီး အစွမ်းထက် မြန်မာ့ဆေးနည်း
March 1, 2021 January 8, 2021 by ApannPyay Media
ကျီးအာသီး အစွမ်းထက် မြန်မာ့ဆေးနည်း “သလိပ်ကြေ” ကျီးအာမြစ်ကိုသွေး၍ လျှာမှာပွတ်ပေးပါ။ခဏချင်း သလိပ်ကြေစေပါသည်။ “ထိပ်ကပ်နာ” အမြစ်ကို အမူန့်ပြုလုပ်၍ ရှူပါ။ “နားတွင်းနာ” အသီးကိုကြိတ်၍ အုန်းဆီနှင့်ရောပြီး မီးပူပူနွေး၍နားတွင်းသို့ ထည့်ပါ။အနာကျက်၍ အသားနုတက်မည်။ “နားပြည်ယို” ကျီးအာသီးကြိတ်ဖတ် ရောထားသောအုန်းဆီကိုကြက်တောင်ဖြင့် နားကြပ်ပေးပါ။ “ပန်းနာရင်ကျပ်” ကျီးအာသီးခြောက်ကိုခြေ၍ ဆေးလိပ်ကဲ့သို့မီးညှိသောက်ပါ။ “လူးဆေး” တပေါင်း တန်ခူးလများတွင် ကျီးအာမြစ်ဥကို တူးပြီးနေလှန်း၍​ ခြောက်သွေ့သောအခါ အမြစ်ခြောက်နှင့် နှမ်းဆီစစ်စစ်ကို ဆတူရောကာ ကြော်ပါ။ အမြစ်ခြောက်များ နီရဲစပြုလာလျှင် အအေးခံ၍ သိမ်းထားပါ။လေဖြန်း လေဖြတ်ဝေဒနာရှင်များအတွက် လူးဆေးဖြစ်ပါသည် ။ ညည အိပ်သည့်အခါ ကြွက်တက်တတ်သူများလည်း ထိုဆီကို လူး၍ အိပ်ပါ။ အဂ္ဂါစာရ က်ီးအာသီး အစြမ္းထက္ ျမန္မာ့ေဆးနည္း “သလိပ္ေၾက” က်ီးအာျမစ္ကိုေသြး၍ လၽွာမွာပြတ္ေပးပါ။ခဏခ်င္း သလိပ္ေၾကေစပါသည္။ … Read more
ကြံရည် သောက်သူများ သတိပြုရန်
January 8, 2021 by ApannPyay Media
ကြံရည် သောက်သူများ သတိပြုရန် ကြံရည်မှာ လူကိုအန္တရာယ် ဖြစ်စေနိုင်သော ဓာတုပစ္စည်းများ စွာသာမက ဘက်တီးရီးယားပိုး မြောက်များ စွာပါဝင်တာကို စင်္ကာပူ နိုင်ငံ MOH မှ investigation လုပ်ရာမှာ တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ စင်္ကာပူနိူင်ငံ စားသောက်ဆိုင် တွေဟာ ကမ္ဘာက စံထားရလောက်အောင် သန့်ရှင်းပါတယ် ။ ဆိုင်တွေကို လည်း ကြပ်ကြပ်မတ်မတ် စီစစ်လေ့ရှိပြီး Grade A , Grade B စသဖြင့် သန့်ရှင်းသပ်ရပ်မှုကို ခွဲခြား ထားပေးလေ့ရှိပါတယ်။ ကြံရည်မှာ ဘက်တီးရီးယားပိုး များစွာ ပါဝင်ကြောင်း တိုင်တန်းမှုများ ပြုလုပ်လာ တဲ့အခါ မှာ MOH မှ ကွင်းဆင်း စစ်ဆေး ကြတဲ့အခါ ဘက်တီးရီးယားပိုး ပါဝင် ရလောက်အောင် ညစ်ညမ်းစွာ … Read more
အသက်စောင့်တဲ့ရှောက်ရွက် ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ငွေ ၁၀၀ ကျပ်လောက်ရှိရုံနဲ့ အလွယ်အကူဝယ်ယူလို့ရပြီး အင်မတန်မှဆေးဘက်ဝင်အကျိုးများတဲ့ ရှောက်ရွက်အကြောင်းလေးတင်ပြချင်ပါတယ်။ ရှောက်ရွက်ဟာ စိတ်ကြည်လင်လန်းဆန်းစေတဲ့ အနံံ့ရှိပြီး မြန်မာတွေအနေနဲ့ တို့စရာ နဲ့အသုတ်တွေမှာ ထည့်သုံးစားသောက်တတ်ကြပါတယ်။ ဘာတွေအကျိုးများတာလဲ? မြန်မာလဆန်းရက်မှာ ရှောက်ရွက်ကိုစားထားရင် အဲဒီတစ်လလုံးလေမဖြတ်တော့ဘူးလို့ ရှေးရိုးစကားရှိပါတယ်။ရှောက်ရွက်ကိုကြက်သွန်ဖြူ၊ငြုပ်ကောင်းတို့နဲ့ဟင်းခါးချက်ပြီးအမြဲတမ်းသောက်ပေးရင် လေငန်းရောဂါပျောက်ပါတယ်။ဒါတင်ပဲလား? မဟုတ်ပါဘူး၊ကမ္ဘာပေါ်မှာအဖြစ်များပြီး၊အပျောက်နည်းတဲ့ ကင်ဆာရောဂါကိုလည်းကာကွယ်ပေးပါတယ်၊ ရှောက်ရွက်ဟာ ကင်ဆာဆဲလ်တွေကို ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ မကြီးထွားနိုင်အောင်ကူညီပေးပါတယ်။တစ်ပတ်ကို ၃/၄ ကြိမ်စားသုံးပေးရုံနဲ့ ကြိုတင်ကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ ရှောက်ရွက်မှာ စိတ်ဖိစီးမှုကိုလျှော့ချနိုင်တဲ့ Astsiri အဆီဓာတ်တစ်မျိုးပါဝင်ပြီး သူ့ အနံ့က ဦးနှောက်ကို စိတ်ဖိစီးမှု လျော့ချတဲ့ ဟော်မှုန်းတစ်မျိုးထုတ်လုပ်အောင် နှိုးဆွပေးတဲ့အတွက် စိတ်ဖိစီးမှုဒဏ်ခံနေရသူများ အထူးစားသုံးသင့်ပါတယ်။ ရှောက်ရွက်မှာ ပိုးသတ်ဆေးလိုမျိုး ပိုးမွှားတွေကိုသေစေနိုင်တဲ့အစွမ်းလည်းရှိတဲ့အတွက် ဖျားနာနေရင် ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်ခံအားကျဆင်းနေရင် ရှောက်ရွက်ကို စားသုံးသင့်ပါတယ်။ ပွက်ပွက်ဆူနေတဲ့ရေထဲကို ရှောက်ရွက်ခပ်ပြီး မနက်မိုးလင်းမှာသောက်ရင် ကိုယ်ခံအားကိုမြှင့်တင်ပေးပါတယ်။အဝလွန်၊အနေခက်၊ အလှပျက်ကာ … Read more
အလှအပအတွက် ပူစီနံရဲ့အသုံးဝင်ပုံ ဒီနေ့မှာတော့ Myanmar Wedding Guide ပရိတ်သတ်ကြီးရဲ့အလှအပအတွက် ပူစီနံရွက်ရဲ့အသုံးဝင်ပုံလေးတွေကို ဝေမျှပေးချင်ပါတယ်။ အလွယ်တကူဝယ်ယူလို့ရတဲ့ ပူစီနံမှာဆိုရင် Antibacterial အစွမ်းသတ္တိအများကြီးပါဝင်နေတာကြာင့် မကြာခဏ ဝက်ခြံပေါက်တတ်သော အသားအရေပိုင်ရှင်များအနေနဲ့ကြိတ်ချေထားသော ပူစီနံရွက်ကို Oat ဂျုံဖြင့်ရောနယ်လိမ်းပေးကာမိနစ် ၂၀ အကြာတွင် ရေနွေးနွေးဖြင့် သန့်စင်ဆေးကြောပေးနိုင်ခြင်းအားဖြင့် ဝက်ခြံတွေကို သက်သာစေမှာပါနော်။ မျက်နှာပေါ်အမည်းအစက်ပြောက်ရှိသူများအတွက်ကတော့ ပူစီနံရွက်ခြောက်ကို မန်ကျည်းသီးအနှစ်၊ ရေအနည်းငယ်တို့ဖြင့် ခပ်ပျစ်ပျစ်ဖျော်ကာ အမည်းအစက်အပြောက်များပေါ်သို့ လိမ်းကျံပေးနိုင်ပါ တယ်။ စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ဂရုတစိုက်လုပ်ပေးမယ်ဆိုရင် သိသာလှပလာပါလိမ့်မယ်နော်/ ပူစီနံကို အသုံးပြုသင့်တဲ့အကောင်းဆုံးအချက်ကတော့ဓာတ်တိုး ဆန့်ကျင်ပစ္စည်းတွေပါဝင်တဲ့အတွက် အိုမင်းရင့်ရော်ခြင်းကနေ ကာကွယ်ပေးနိုင်တာကြောင့်ပါပဲရှင်။ ဒါ့အပြင် ၀ိတ်ချချင်တဲ့ ချစ်တို့အတွက် သခွားသီး ၊ သံပုယိုရည် ၊ ပူစီနံ ၊ ဂျင်း နဲ့ ရေတို ့ကို ဖော်စပ်သောက်သုံးပြိးဝိတ်ချလို့ရပါတယ်နော်။ Credit … Read more
ကိုယ်ဝန်ဆောင်် မိခင်များနဲ့ နဂါးမောက်သီး
ကိုယ်ဝန်ဆောင်် မိခင်များနဲ့ နဂါးမောက်သီး နဂါးမောက်သီးကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်အတွင်း စားသုံးပေးရင် ပေါင်မပြည့်၊ လမစေ့ပဲ ကလေးမွေးဖွားတာကို ကာကွယ်ပေးပါတယ် မေမေတို့ရေ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်အတွင်းမှာ မေမေတို့ကိုယ်တိုင်ကော၊ ဗိုက်ထဲက ကလေးလေးအတွက်ပါ အာဟာရဓါတ်များ ပြည့်စုံလုံလောက်အောင် စားပေးဖို့အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်နော်။ စားရမယ့်အစားအစာများထဲကမှ အခု မေမေတို့အတွက် နဂါးမောက်သီးရဲ့ ပါဝင်တဲ့ အာဟာရဓါတ်တွေရဲ့အကြောင်းကို Kalay မှ ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ နဂါးမောက်သီးခွဲနေခြင်း နဂါးမောက်သီးမှာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မေမေတို့ အဓိကလိုအပ်ချက်ဓါတ်ဖြစ်တဲ့ သံဓါတ်များစွာ ကြွယ်ဝစွာ ပါဝင်ပါတယ်။ နဂါးမောက်သီးရဲ့ တစ်ရာဂရမ်မှာ သံဓါတ် တစ်မီလီဂရမ် နီးပါး ပါဝင်တာကြောင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်အတွင်း တကယ့်ကို စားသုံးသင့်တဲ့ အသီးပါ။ သံဓါတ်ဆိုတာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်အတွင်း သွေးပမာဏကို တိုးပွားစေတဲ့အပြင် သွေးနီဥအတွက် လိုအပ်တဲ့ ဟေမိုဂလိုဘင် ဖြစ်ပေါ်စေတာကြောင့် ပေါင်မပြည့် လမစေ့တဲ့ ကလေးမွေးဖွားတာကို ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ ကျန်းမာရေးနဲ့ အထူးသင့်တော်တဲ့ နဂါးမောက်သီး ဖြစ်ပါတယ် ဒါ့အပြင် ကယ်လ်ဆီယမ်ပါဝင်တာကြောင့် ကလေးတွေရဲ့ သွားတွေနဲ့ အရိုးေတွေကို … Read more
မြေအိုးလုပ်ခြင်းအတွက်စလစ်ဖြတ်ပိုင်းပုံစံ၏အဓိပ္ပာယ် စလစ် (noun) ရေထဲမှာရွှံ့မှုန်တစ်အရည်ရပ်ဆိုင်းမှုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ယေဘုယျအားဖြင့်ပိုမိုပါးလွှာကြောင်းအတွက်ဒါဟာ၎င်း၏အလွန်နီးကပ်ဆွေမျိုး, slurry ထံမှကွဲပြားနေသည်။ စလစ်က၎င်း၏သည်အခြားနီးစပ်ဆွေမျိုး, ထက်ပိုရွှံ့အကြောင်းအရာရှိပါတယ် engobe ။ စလစ်အများအားဖြင့်လေးလံသောမုန့်များ၏ရှေ့နောက်ညီညွတ်မှုဖြစ်ပါတယ်။ စလစ်မကြာခဏအလှဆင်အတွက်အသုံးပြုသည်။ ဒါဟာ၏သဘာဝအရောင်ကျန်ရစ်စေခြင်းငှါ ရွှံ့ခန္ဓာကိုယ် ဖန်ဆင်းသောအနေဖြင့်, သို့မဟုတ်ပါကအောက်ဆိုဒ်နှင့်အတူရောင်စုံနိုင်ပါသည်။ ဒါဟာစိုစွတ်သောသို့မဟုတ်နူးညံ့သောသားရေ-ခက်ဖို့လျှောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ် greenware ။ စလစ်လည်းအင်္ဂတေမှိုထဲမှာရွှံ့ ချ. အတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ နီးပါးအမြဲစလစ် Casting အခြောက်သည်အထိတစ်ဦးတစ်ပုံစံတည်းတသမတ်တည်းရပ်ဆိုင်းမှုအတွက်စောင့်ရှောက်ရန်ပါဝင်ပစ္စည်းများဆက်ပြောသည်သိရသည်။ အမှတ်ပေးများအတွက်ကော်အဖြစ်ချော်နဲ့ချော် စလစ်သင့်ရဲ့ရွှံ့စေးခန္ဓာကိုယ်မှအခြေအနေမျိုးကနေဖန်ဆင်းတော်နိုင်ပါသည်။ သူတို့တစ်တွေ slurry သို့ပျော့ပျောင်း, ပြီးတော့မဆိုဖုဖယ်ရှားပစ်ရန်တစ်ကွက်ကနေတဆင့်နှိုးဆော်နှင့်မျက်နှာပြင်မှီတိုငျအောငျရေမှာသူတို့ကိုစုပ်ယူထားသည်။ သင်သည်သင်၏ greenware အပေါ်အတူတကွပူးပေါင်းချင်သွင်းယူမျက်နှာပြင်က Apply ။ တစ်ခါတစ်ရံဒီအလစ်-slurry ဟုခေါ်သည်။ ကြွေဖဲ့ကိုအလှဆင်ခြင်းချော် ကြွေထည်ပစ္စည်းကိုအပိုင်းပိုင်းအလှဆင်ဖို့စလစ်သုံးစွဲဖို့နည်းလမ်းများစွာရှိပါတယ်။ တစ်ဦးကပိုပြီးအရည်စလစ်ပေါ်ဖျန်းပေါ်တွင် brushed နိုင်ပါတယ်, ဒါမှမဟုတ်အပိုငျးပိုငျးစလစ်တစ်ဦးကွန်တိန်နာ၌နှစ်ပြီးသောနိုင်ပါသည်။ တစ်ဦးကထူစလစ်တစ် condiments ပုလင်းသို့မဟုတ်အခြားကပ်တွယ်မှုကို Applications ကိုအသုံးပြုပြီးအရာဝတ္ထုပေါ်သို့ trailed နိုင်ပါသည်။ စလစ်၏အကွိမျမြားစှာအလွှာအနုစိတ်ဒီဇိုင်းလုပ်တက် built နိုင်ပါသည်။ … Read more
လက်ဖက်ခြောက်နဲ့ ကျန်းမာရေးအာနိသင် ကမ္ဘာပေါ်မှာ လူတွေ အသောက်အများဆုံးဟာ ရေဖြစ်ပြီး ဒုတိယအသောက်အများဆုံးကတော့ ရေနွေးကြမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့တဝှမ်းလုံးအတိုင်းအတာအရ နှစ်စဉ် လက်ဖက်ခြောက်ထုတ်လုပ်မှုဟာ စုစုပေါင်းကီလိုဂရမ် ၃ ဘီလံယံတောင် ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ရေနွေးကြမ်းကို အဖြူရောင်၊ အစိမ်းရောင်၊ အနီရောင်၊ အနက်ရောင် စသဖြင့် သောက်ကြပြီး Camellia sinensis လက်ဖက်ပင်မျိုးစိတ်မှ ရရှိတဲ့ လက်ဖက်ရွက်ကို အခြေခံထားတာဖြစ်ပါတယ်။ လက်ဖက်ခြောက်မှာ ပါဝင်တဲ့ ကျန်းမာရေးကို အဓိက ကောင်းစေတဲ့ ပါဝင်ပစ္စည်းတွေဟာ catechins နဲ့ epicatechins တို့က ရရှိတဲ့ polyphenols ကြောင့်ဖြစ်ပြီး ရောင်ရမ်းမှုကို သက်သာစေခြင်းနဲ့ ဆဲလ်ပျက်စီးမှုကို လျော့ကျစေခြင်း ဂုဏ်သတ္တိရှိကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ လက်ဖက်ခြောက်ဟာ ပြုလုပ်တဲ့နည်းကို လိုက်ပြီး ကွဲပြားခြားနားပါတယ်။ လက်ဖက်ခြောက်အဖြူရောင်ဟာ ဓာတုနည်းပါဝင်မှု အနည်းဆုံးဖြစ်ပြီး အစိမ်းရောင်က … Read more
ကော်ဖီမှုန့်ကို ခြင်နိုင်ဆေးအဖြစ် ဒီလိုအသုံးပြုနိုင်
ကော်ဖီမှုန့်ကို ခြင်နိုင်ဆေးအဖြစ် ဒီလိုအသုံးပြုနိုင် နှပ်ပြီးသား ကော်ဖီမှုန့်က ခြင်နိုင်ဆေးနဲ့ အင်းဆက်ပိုးသတ်ဆေးအဖြစ် စွမ်းဆောင်နိုင်ကြောင်း ကျွမ်းကျင်သူအများစုက ဆိုပါတယ်။ အသုံးပြုပြီးသား ကော်ဖီမှုန့်မှ ထုတ်လွှတ်တဲ့ ပြင်းရှတဲ့အနံ့ကို ခြင်တွေ မလိုလားပါဘူး။ ကော်ဖီမှုန့်က ခြင်ပေါက်ကလေးများ အသေသတ်ရာမှာ ထိရောက်သလို အစွမ်းထက်သဘာဝအင်းဆက်ပိုးသတ်ဆေးအဖြစ်လည်း အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ကော်ဖီမှုန့်ကို ခြင်နိုင်ဆေး/အင်းဆက်ပိုးသတ်ဆေးဖြစ် အသုံးပြုနည်းကတော့ အရင်ဦးဆုံး နှပ်ပြီးသားကော်ဖီမှုကို နောက်ဖေး၊ အိမ်ရှေ့စတဲ့ အိမ်နီးနားရှိ ရေဝတ်တဲ့နေရာ အသေး၊ အကြီး ဘယ်မဆိုနေရာမှာ လောင်းထည့်ပါ။ အဲဒါက ပတ်ဝန်းကျင်တွေက ခြင်တွေအတွက် နေထိုင်ကျင်လည်ရန်အတွက် မသင့်လျော်ဖြစ်စေပြီး ထိုနေရာမှာ ရှင်သန်ပေါက်ဖွားနေတဲ့ ခြင်ပေါက်လေးတွေကိုလည်း သေစေပါလိမ့်မယ်။ ဒါမှမဟုတ် ဒီရိုးရှင်းတဲ့ နည်းလမ်းလေးလည်း သုံးကြည့်နိုင်ပါတယ်။ သံဗူး(သို့) အလူမီနီယမ်ခဲပြားထဲ ကော်ဖီမှုန့်ကို အင်းဆက်တွေ အနံ့နဲ့ ထွက်ပြေးအောင် မီးရှို့နိုင်ပါတယ်။ … Read more
မာလကာသီးရဲ့ အာနိသင်အကြောင်း မသိသေးရင်ဖတ်ထားနော်
မာလကာသီးရဲ့ အာနိသင်အကြောင်း မသိသေးရင်ဖတ်ထားနော် လူတွေ နေ့စဉ်နဲ့အမျ စားသုံးနေကြတဲ့ အစားအစာတွေထဲမှာ ဆေးဘက်ဝင်တဲ့ သဘာဝ အသီးအနှံတွေပေါများစွာရှိပါတယ်။သဘာဝအသီးအနှံတွေဟာ စိမ်းစိမ်းစိုစို ၊လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်၊ အရည် တစ်ရွှမ်းရွှမ်းနဲ့ လူတွေအတွက်ဆေးဘက်ဝင်အကျိုးပြုလွန်းပါတယ်။ အသီးတစ်မျိုးစီမှာ မတူညီတဲ့ ကျန်းမာရေးအကျိုးပြု အာနိသင်တွေရှိတတ်ကြပြီး အကျိုးရှိရှိ မှီဝဲသုံးဆောင်ပါက အကျိုးကျေးဇူးကြီးမားလှပါတယ်။ မာလကာသီး ဆိုရင် လူတွေရဲ့အိမ်ခြံဝင်းတွေထဲမှာ လွယ်ကူစွာ ပေါက်ရောက်သီးမှည့်နေကြတဲ့အသီးတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ အပင်ပေါ်မှာ အပြွတ်လိုက်အခိုင်လိုက်သီးမှည့်နေတတ်ကြပြီး အလွယ်တကူ ဆွတ်ခူးစားသုံးနိုင်တဲ့ အသီး၊ ဈေးဆိုင်တွေမှာ အလွယ်တကူ ဝယ်ယူစားသုံးနိုင်တဲ့ အသီးတစ်မျိုးဆိုရင် ပိုမှန်ပါလိမ့်မယ်။ သူ့ရဲ့အရသာက ချိုချိုလေးနဲ့စားလို့ကောင်းလွန်းသလို ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးပြုမှုတွေလည်းရှိပါတယ်။ ဝမ်းရောဂါ ပျောက်ကင်းစေဖို့အထောက်အကူပြုခြင်း လူတွေဟာ မိုးရာသီမှာ အထူးသဖြင့် ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျောရောဂါအဖြစ်များတတ်ကြပါတယ်။ မာလကာသီးဟာလည်း အခုလို မိုးရာသီမှာ ဆိုရင် ပိုလို့ ပေါပေါများများ စားသုံးနိုင်ကြပါတယ်။ဒါကြောင့် မိုးရာသီအတွင်းမှာ ဝမ်းပျက်၊ … Read more
စားလို့ကောင်းပြီး ဆေးဖက်ဝင်တဲ့ ကဆစ်သီး..
January 27, 2021 January 8, 2021 by ApannPyay Media